तेरो विश्‍वास असल वा शुद्ध छ भन्‍ने होइन, बरु मेरो काम आश्‍चर्यजनक छ! सबै कुरा मेरो कृपाले गर्दा नै भएको हो! तँसँग स्वार्थ वा अहङ्कारको अलिकति पनि भ्रष्ट स्वभाव हुनु हुँदैन, नत्र म तँमा काम गर्ने छैन। तैँले के कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्‍नुपर्छ भने, मानिस पतन हुन्छ कि दह्रिलो गरी खडा हुन्छ भन्‍ने कुरा तिनीहरूको कारणले गर्दा होइन; यो मेरो कारणले गर्दा हो। आज, यदि तैँले यो चरणलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्दैनस् भने, तँ अवश्य नै राज्यमा प्रवेश गर्न असफल हुनेछस्! तैँले के कुरा बुझ्‍नुपर्छ भने, आज गरिँदै गरिएको काम परमेश्‍वरको अचम्‍मको काम हो; मानिससँग यसको कुनै सम्‍बन्ध छैन। मानिसका कार्यहरूको मूल्य के नै छ र? तिनीहरू स्वार्थी, अहङ्कारी, र घमण्डी नहुँदा, तिनीहरूले परमेश्‍वरको व्यवस्थापनमा वाधा पुर्‍याइरहेका र उहाँको योजनालाई नष्ट गरिरहेका हुन्छन्। ए, भ्रष्टहरू! तँ आज ममाथि भरोसा गर्न आउनैपर्छ; यदि तँ आउँदैनस् भने, आज म तँलाई तैँले केही पनि हासिल गर्नेछैनस् भनेर भन्छु! सबै कुरा व्यर्थमा गरिएको हुनेछ र तिमीहरूका काम-कार्यवाही व्यर्थ हुनेछन्!
सङ्कोच मान्‍ने वा हिचकिचाउने नगर; आज मलाई प्रेम गर्ने हरेकमा मेरो अचम्‍मको काम अघि बढाइनेछ। आफूलाई नम्र तुल्याउनेहरूको निम्ति कुनै काम छैन, र आज पूर्ण रूपमा नम्र भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै म प्रयोग गर्छु। मलाई साँचो हृदयले प्रेम गर्ने, अरूले नीच रूपमा हेरेकाहरू, र आफूलाई मेरो निम्ति पूर्ण रूपमा खुलस्त गर्नेहरूका निम्ति मात्रै म पूर्ण रूपमा खुलस्त हुनेछु। म तँलाई मेरा धारणाहरू बुझाउनेछु, र तँ सधैँ मेरा आशिषहरू प्राप्त गर्दै मेरो अघि हुनेछस्। आज मेरो लागि आफूलाई समर्पित गर्नेहरू, आज मेरो लागि आफूलाई चढाउने, र आज मेरो लागि बोझ बोक्‍नेहरूलाई म पूर्णतया दुर्व्यवहार गर्नेछैन—यसरी मेरो धार्मिकता प्रकट हुन्छ। मेरो बारेमा गुनासो नगर; मेरो अनुग्रह नै तिमीहरूका निम्ति पर्याप्त छ। तँ आएर यसलाई चाख्दा राम्रो हुन्छ, ताकि तैँले अतुलनीय मिठास चाख्‍न सक्। यसले तँभित्र मेरो निम्ति प्रेम मात्रै निर्माण गर्नेछैन, तर यसले तिमीहरूको यस प्रेमलाई गहन पनि बनाउनेछ।
मेरो काम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइन्छ, र यो पूर्ण रूपमा निस्फिक्री वा भ्रमित छैन। मलाई पछ्याउनको लागि, तिमीहरूले कुराहरू यसरी गर्नु पनि पर्छ। मेरो व्यवहारलाई हेरेर मबाट सिक; यसरी, यदि तिमीहरूले मेरा पाइलाहरूलाई पछ्यायौ भने, तिमीहरूलाई राज्यको प्रकटीकरणमा ल्याइनेछ। एउटै स्वरमा हर्षोल्‍लास गर! मेरा पुत्रहरू! परमेश्‍वरको काम तिमीहरूमा, मानिसहरूको यो समूहमा पूरा गरिनेछ। के तिमीहरू आशिषित महसुस गर्दैनौ?
वास्तवमा नै यो बुझ्‍न कठिन छ! आज मैले तिमीहरूलाई यहाँ ल्याएको छु, ताकि तिमीहरूले मेरो आश्‍चर्यजनक कार्यलाई देख्‍न सक!